19 Lacag Bixin Badan Oo Loogu Jiro Aabbayaasha Cadaadiska Yar | 2022
Bogga ugu weyn 19 Lacag Bixin Badan Oo Loogu Jiro Aabbayaasha Cadaadiska Yar | 2022
Waa waajib saaran waalidiinta inay masruufaan caruurtooda. Si kastaba ha ahaatee, aabbayaasha qaarkood waxay dareemeen inay tahay mas'uuliyadda asaasiga ah maadaama dumarkoodu ay horeba wax badan u qabteen markay timaaddo daryeelka carruurta iyo qoyska oo dhan.
In kasta oo aad u shaqayn karto Aabbe ahaan, haddana dakhligaagu ma noqon karo mid ku filan si aad u gaarto hadafyadan, waxaadna u baahan doontaa habab kale oo hal -abuur leh oo fudud si aad lacag u samaysato.
Waxaan soo bandhigay dhowr dhaq-dhaqaaq dhinaca mushaharka sare leh oo loogu talagalay Aabbayaasha qaba walaaca yar kuwaas oo kaa caawin kara inaad dhisto qulqulka dakhliga. Qayb ka mid ah sharraxaaddooda ayaa ka hadli doonta dhammaan habka iyo sida loo gaari karo.
Maxaad ugu Baahan tahay Hustle Side-ka ah ee aan Cadaadiska Lahayn?
Shaqo kasta waa mid adag. Iyo haddii aad u badan tahay inaad ku dhisto bangiga aqoonta ama khibrad mihnad kale habeen, si fudud uma beddeli kartid shaqooyinka.
Halkii aad fiirin lahayd inaad shaqadaada gebi ahaanba ka baxdo, waa inaad raadisaa inaad naftaada u abuurto il dakhli oo kale. Waxaadna ku samayn kartaa tan adiga oo leh buuq dhinac ah oo ku siinaya walaac iyo lacag badan.
Qaybtan, waxaan ku iftiimin doonaa qaar ka mid ah dhaq-dhaqaaqyada dhinaca mushaharka sare leh ee loogu talagalay Aabbayaasha kadeedka yar. Waxaa ka mid ah:
1. Suuqgeynta Xiriirka
Suuqgeynta ku -biirintu waa hab fiican oo aad lacag ugu samaysan karto naftaada Aabbe ahaan. Waxaad ku qori kartaa mid kasta oo ka mid ah meheradaha suuq -geynta ee ku xiran oo aad ka iibin kartaa alaabadooda komishan.
Is -diiwaangelinta mid ka mid ah aaladahaan waa mid la awoodi karo mana u baahnid wax badan si aad u dejiso qaab -dhismeedka oo dhan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad abuurto nuqul xayaysiis oo wanaagsan oo loogu talagalay heerarka sarrifka sare.
2. Socodka Xayeysiisyada Facebook
Socodka ololaha xayeysiiska Facebook waxaa lagu samayn karaa riixitaanka badhanno yar. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatadu inta badan waa marka xayeysiisku uusan beddelmin.
Waxaad si fudud u baran kartaa sida loo abuuro xayeysiisyada Facebook oo si fudud isu beddelaya adigoo baranaya hacks -ka. Waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato inaysan waqti badan qaadanayn
Markaad xayeysiisyada Facebook u waddo meheradaha, waxaad ka qaadaa guddiyada miisaaniyaddooda xayeysiiska. Inta badan, waxaad ku dallaci kartaa 20% ama ka badan.
3. Maareynta Warbaahinta Bulshada
Kanaalada warbaahinta bulshada waxay soo jiitaan malaayiin ilaa balaayiin isticmaaleyaal ah. Marka, waa meel kulul oo loogu talagalay xayaysiiyayaasha doonaya inay kasbadaan dareen xooggan badeecadaha iyo adeegyada macmiilkooda.
Sababtoo ah tirooyinka isticmaalaha ee cajiibka ah oo sii kordhaya, shirkaduhu waxay shaqaaleeyaan maamulayaasha warbaahinta bulshada si ay gacan uga geystaan ​​dhisidda iyo maareynta bogaggooda warbaahinta bulshada.
Ahaanshaha maareeyaha warbaahinta bulshada sida caadiga ah maahan mid fudud bilowga laakiin mar haddii aad barato xadhkaha, waxaad si fudud u gaari kartaa ujeeddooyin la beegsaday.
4. Qoraalka Mawduuca & Qoraalka Qoraalka
Dhab ahaantii waan kuu soo qorayaa hadda, si aad u oggolaato inaan aad ugu khibrad badanahay aaggan.
Qoraalka nuxurku waa suuq weyn. Shirkad kasta oo u baahan inay iibiso badeecad, waxay u baahan yihiin qoraal-qoraal ah oo kicin doona ka-qaybgalka iyo iibinta cirka isku shareertay. Taasna waad samayn kartaa.
Sicir la isku raacsan yahay, waxaad u abuuri kartaa waxyaabo loogu talagalay blogyada, joornaalada, shirkadaha, iyo xitaa ururada dawliga ah. Runtii, waa mid ka mid ah dhaq-dhaqaaqyada mushaharka sare leh ee Aabbayaasha raba inay dhistaan ​​dakhli dheeri ah.
5. Kiraynta Baabuurka
Haddii aadan jeclayn wadista baabuurta, waxaad u ogolaan kartaa baabuurkaaga inuu lacag kuu sameeyo. Waxaad ka kiraysan kartaa baabuurkaaga adeegyada kirada kuwaas oo ku siin doona lacag maalin kasta.
Tani waa hab weyn oo lagu dhisi karo dakhli dheeraad ah inta aad diirada saarto qorshayaasha kale ee aad leedahay.
6. Adeegyada Wadista
Dad badan ayaa u safra fasax, ganacsi, iyo dhacdooyin kale. Sababtoo ah ma yaqaaniin magaalada, waxay u arkaan inay aad u dhib badan tahay inay sii wadaan weydiinta jihada meel kasta oo ay rabaan inay joogaan.
Aabe ahaan doonaya dhaq-dhaqaaq dhinaca mushaharka sare leh, waxaad u fidin kartaa adeegyadaada wadista shaqsiyaadkan. Adiga, waxaa loo dammaanad qaaday badbaado waxayna dareemi doonaan raaxo.
Lacag aad u badan ayaad ku dallaci kartaa adeeggan muddada ay joogi doonaan.
7. Qor eBook
Waxaan dhihi karnaa dhaqanka akhriska ayaa si tartiib tartiib ah u dhimanaya laakiin taasi run ma noqon doonto. Shirkadaha waaweyn sida Amazon waxay ku bilaabeen dib -u -dhiska buugaagta jaakada waraaqaha ee ebooks -ka iyo ebooks -ka ayaa maalin walba caan ka hela.
Waxaad ku qori kartaa ebook mawduuca aad khibrad qoto dheer u leedahay oo aad iibiso. Xitaa waxaad is-daabici kartaa ebook gaaga si uu kaaga caawiyo inaad badbaadiso kharashka daabacaada.
8. U shaqee sidii Kaalmo Weyn
Shaqooyin badan ayaa maanta ah kuwo la taaban karo. Uma baahnid inaad yeelato xiriir fool-ka-fool ah si aad u fuliso hawlaha lagama maarmaanka ah ee u horseeda yoolka hamiga leh.
Marka, waxaad u shaqeyn kartaa sidii kaaliye dalwaddii ah oo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha fikradaha iyo la -taliyayaasha.
9. Bilow Baridda onlaynka ah
Koorsooyinka internetka ayaa dakhli badan soo saaray. Intii lagu jiray xilligii masiibada, shaqsiyaad iyo hay'ado badan ayaa qaatay barashada internetka.
Maanta, barashada khadka tooska ah waa caadi oo waalidiintu waxay bixiyaan ujrooyinka isdiiwaangelinta ee ubadkooda si ay wax u bartaan. Waxaad si fudud u abuuri kartaa koorso ku saabsan maadada aad taqaan oo aad geliso madal kasta oo eLearning ah.
Waxbaridda khadka tooska ah waa mid ka mid ah dhaq-dhaqaaqyada dhinaca mushaharka sare leh ee Aabbayaasha jecel waxbarida.
10. Ka -iibsiga Lacag -La -soo -cesho
Waxaad lacag ka samayn kartaa wax iibsiga dadka. Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si faahfaahsan kuugu sharaxo. Markaa, si fudud u dhufo xidhiidhka aan ku riday sanduuqa hoose. Waa hab tafatiran oo ku tusaya sida aad dadka wax ugu iibsanayso.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska 15 Siyaabood Oo Xalaal Ah Oo Dadka Lacag Loogu Siin Karo.
11. Nadiifinta Guriga
Aabe ahaan, ma sameyn kartid nadiifin la'aan. Carruurtu runtii wax bay khalkhal gelin karaan waana inaad nadiifisaa. Si kastaba ha ahaatee, uma baahnid inaad ku koobto nadiifinta gurigaaga - waad kordhin kartaa.
Waxaad siin kartaa adeegyada nadiifinta guriga qoysaska fasaxa ku jira iyo xitaa shirkadaha.
12. Noqo Qoraal -qorayaal
Qoraal-qoraal ahaan ahaan, waxaad heleysaa soo jeedin aan xad lahayn si aad u qorto agabyo kala duwan. In kasta oo habka aad ku noqon lahayd qoraal-qoraal aanay fududayn baahida loo qabo in si fiican loo fahmo ugu yaraan laba luqadood, abaal-marinta aad hesho ayaa qarinaysa.
Waxaad u shaqayn kartaa sida qoraaga qoraalka marka aad fulinayso hawlo kale oo dakhli keeni kara.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska 14 Shaqooyinka Qoraalka oo Si Fiican U Bixiya
13. Bilow YouTube Channel a
Xayeysiyeyaal kala duwan ayaa ku soo qulqulaya YouTube iyagoo wata xayaysiisyadooda. Waxaynu u nisbayn karnaa qancintooda heerka beddelka sare ee ay helaan ama tirada sii kordhaysa ee isticmaalayaasha goobta.
Aabbe ahaan raba inuu dhiso dhaqdhaqaaq dhinaca mushaharka sare leh, lahaanshaha akoon YouTube ayaa runtii ku caawin kara. Waxaad si fudud ugu abuuri kartaa isticmaalayaasha waxyaabo xiiso leh taasoo soo jiidan doonta macaamiil badan. Mar kasta oo ay sarreeyaan macaamiishu, waa in badan oo xayeysiisyada madalku u soo diro akoonkaaga.
14. Qaado Baaritaano Online ah
Soosaarayaasha alaabada waxay abuuraan sahan online ah si ay uga caawiyaan inay jawaab celin ka helaan alaabtooda. Marar badan, sahannadani waxay noqon karaan kuwo dheer oo runtii daalan. Marar kale, waxay qaadataa dhowr daqiiqo in la dhammaystiro.
Adiga oo ah Aabe doonaya inuu helo dakhli dheeraad ah, waxaad buuxin kartaa sahan onlayn ah si uu kaaga caawiyo inaad jeebkaaga buuxiso.
15. Samee Jaantusyada Farshaxanka
Dadku waxay jecel yihiin shaqada wanaagsan ee farshaxanka. Farshaxanka ayaa lagu iibiyaa xaraashka malaayiin doolar. Sawirida qayb farshaxan waxay qaadan kartaa qayb ka mid ah wakhtigaaga laakiin soo celinta maalgashiga ayaa dabooli doonta xanuunkaaga.
Waxaad ka iibin kartaa farshaxankaaga matxafyada, shirkadaha alaabta guriga, iyo qurxinyaasha gudaha. Markaa, ma samayn doontid wax khasaare ah markaad dhisto dakhli dheeraad ah naftaada.
16. Gurigaaga Kiro
Waxaa laga yaabaa inaadan iska qorin fikraddaada ah inaad kireysato gurigaaga laakiin waxaad ku qanci doontaa marka laguu dammaanad qaado badbaadada qalabkaaga iyo lacag badan.
Xaqiiqdii, waad kireysan kartaa gurigaaga waxaadna kaheli doontaa lacag quruxsan macaamilka. Airbnb waa madal aad gurigaaga uga kirayn karto dadka ku soo booqda oo aad lacag ku hesho
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Sida Loo Iibsado Guri Aan Lacag Lahayn 2021: 7 Siyaabood Oo Sharci Ah.
17. Ku iibso Shopify
Shopify waa mid weyn madal eCommerce sida Amazon. La aasaasay 2006, waxay ku koreen warshad bilyan oo doolar ah Kanada. Waqtigan xaadirka ah, Shopify waxay awood u leedahay in ka badan 500,000 ganacsi oo in ka badan 1.2 milyan oo qof ay ka diiwaangashan yihiin gadaasha goobta.
Xog-ururintan weyn, waxaad si fudud uga faa'iidaysan kartaa markaad iibiso alaabtaada. Shopify waxay ka dhigtaa suuqgeynta iyo iibinta alaabada mid aad ugu fudud goobtooda, sidaa darteed, waa inaad qaadataa.
Runtii, waa dhaq-dhaqaaq dhinaca mushaharka sare leh oo loogu talagalay Aabbayaasha doonaya dakhli dheeraad ah.
18. Dib -u -eegis ku samee Alaabooyinka Shirkadda
Iyada oo si fiican loo raaco mid kasta oo ka mid ah xisaabaadkaaga bulshada, waxaad ku socodsiin kartaa dib -u -eegista alaabooyinka shirkado kala duwan.
Dib u eegis kasta oo aad sameyso, waxaad abuuri kartaa heshiis lacag-bixineed kaas oo hubinaya inaad sameyso lacag kugu filan.
19. Ka fiirso Filimada Netflix
Netflix waxay leedahay in ka badan 150 milyan oo macaamiil ah kuwaas oo sii daaya filimada ugu wanaagsan iyo bandhigyada TV -ga adduunka. Laakiin isticmaaleyaal badan ayaan garanayn inay ka helaan filimada ugu fiican madasha kadib geedi socod baaritaan dhammaystiran oo dhammaystiran.
Kahor intaan filim kasta laga sii deyn Netflix, koox dib -u -eegayaashu waxay soo jiitaan dhaleeceyn wax -ku -ool ah waxayna cabbiraan tayada filimka iyo soo -dhoweyntiisa iyo filim kasta oo ay dib -u -eegaan, waa la siiyaa lacag.
Waxaad si fudud u noqon kartaa dib u eegis Netflix oo weli shaqadaada hayso. Markaa, runtii waa dhaq-dhaqaaq dhinaca mushaharka sare leh ee Aabayaasha si ay dakhli dheeraad ah u soo galaan
Waan hubaa inaad ku raacsan tahay in dakhliga dheeraadka ah ee culayska yar uu leeyahay faa'iidooyin ka badan faa'iido darrada. Waxaad awoodi doontaa inaad reerkaaga masruufto, keydiso oo aad awoodo nolol raaxo leh.
Markaa, si fudud u qaado mid ka mid ah hababka aad ku heli karto dhaq-dhaqaaq dhinaca mushaharka sare leh oo aad bilowdo hirgelinta. Waxaas oo dhan waa ficilka aad ku dhaqaaqdo ma aha aqoonta aad leedahay.
7 Talaabo Oo Fudud Oo Ku Saabsan Sida Loo Bedelo Bangiyada Adigoon Walbahaar Lahayn | Tilmaan Buuxo
4 Siyaabaha Hab -nololeedkaagu u Xalin Karo Dhibaatooyinka Lacagta | TILMAAMAHA
15 Hustles Side Best for Introverts In 2022
21 Dhaqdhaqaaqa Lacag -bixinta Sare ee Dadka Naafada ah
30 Shabakadaha Internetka ah oo lagu iibiyo Farshaxanka 2022
Beddelka ugu Fiican PayPal ee eBay | Si Wanaagsan U Shaqeeya
Clickworker ma u qalmaa Mise waa khiyaano weyn? Faallooyinka Clickworker -ka Daacad ah 2022
Dakhliga aan iswaafaqsanayn ayaa dhibaato ku ah hawl-wadeenno badan iyo shaqaale guri. Markaa, helida madal…
Lacag Ku Bixi Si Aad U Cabto Haramaha: Samee In Ka Badan $ 5000/Bishii 2022
Waxaa soo baxday in aad xirfad ka samaysan karto haramaha sigaarka! Haa, kuma ciyaarno, shirkad...
30 Meelood oo Lagu Iibiyo Alaabta La Adeegsaday Lacag ahaan 2022 | Khadka Tooska ah & Khadka Tooska ah
Marka ay soo baxaan alaab guri cusub, waxaan inta badan rabnaa inaan iska dhaafno kuwii hore anagoo aan…
21 Lacag-bixiyaha Sare ee Xag-jirka ah ee 25-jirka ah oo leh Cadaadis Yar
Waxay u muuqataa markaad gaarto 25, mas'uuliyaduhu waxay noqdaan kuwo caan ah weligii. Iyo inaan la kulmo dhammaan…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Alwaaxda Sanadka 2022 | Tilmaame Aan Waxba Ka Jirin.
Inaad awood u yeelatid inaad qoryo u beddesho wax qurux badan Waa xirfad dad badan…